Ankadindramamy : maty ny mpanavotra ilay ankizy lasan’ny rano | NewsMada
Ankadindramamy : maty ny mpanavotra ilay ankizy lasan’ny rano
Tsy fahita teny Ankadindramamy ity indray mitoraka ity. Nandritra ny orambe ny alahady hariva teo, ankizy iray 9 taona eo lasan’ny rano teny an-toerana. Araka ny fitantaran’ny manodidina, niaraka tamin’ny reniny ilay zaza io tokony ho tamin’ny 6 ora hariva, tamin’ny fotoana nampirotsaka be ny orana mihitsy. Niampita tetezana ireo ka nisolifatra ilay ankizy ary latsaka tany anaty rano. Tsy hita ilay zaza nanomboka teo.
Omaly maraina, voalaza fa nisy tovolahy iray nitady ilay zaza tao amin’ilay rano, saingy maty natelin’ny rano koa izy io. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina sy ny polisy nizaha ny toe-javatra. Ilay tovolahy nikasa hanavotra ity no hita faty ary nakarina an-tanety ny razana. Ilay zaza kosa, mbola tsy hita popoka hatramin’ny omaly hariva.
Mampidi-doza ary tokony samy hitandrina ny rehetra manoloana ny fiakaran’ny rano eto an-dRenivohitra rehefa avy ny orana. Olana ny fivarinan’ny rano ka miakatra ny rano amin’ny faritra rehetra. Efa namoa-doza ny teny Besarety ka nahafatesana olona roa, vao tsy ela akory izay. Ity indray teny Ankadindramamy, asa aiza ny mety ho manaraka?